အမ်စတာဒမ်အတွက်လုပ်ဖို့အများစုမှာထူးခြားသောအမှုအရာ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အမ်စတာဒမ်အတွက်လုပ်ဖို့အများစုမှာထူးခြားသောအမှုအရာ
စာဖတ်ချိန်: 8 မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 02/05/2020)
သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အအမ်စတာဒမ်သွားရောက်လည်ပတ်သို့မဟုတ်သေးပြန်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့တူးမြောင်းစူးစမ်းဖို့ပြန်လာနေကြသည်ရှိမရှိ, သင်နှင့် ပတ်သက်. သိလိုပါလိမ့်မယ် အမ်စတာဒမ်အတွက်လုပ်ဖို့အများဆုံးထူးခြားသောအမှုအရာ! သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် အမ်စတာဒမ်အတွက် Damrak Avenue ကျော်လွန် Adventures ရှာအဆင်သင့်, ဤစာရင်းတွင်သင့်ရဲ့ထွက်ပြေးဖို့အမှန်တကယ်မှော်စေမည်!
ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးရေးသားခဲ့ခြင်းနှင့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည် ကမ်ဘာပျေါမှာစျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေဝက်ဘ်ဆိုက်.
အဘယ်အရာကိုအတွက်နေ့ခင်းလက်ဖက်ရည်ရှိခြင်းထက် cuter နှင့်ပိုပြီးထူးခြားတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် အမ်စတာဒမ်အသေးဆုံးအိမ်? ဟုတ်ကဲ့, ဒီကျိန်းသေအဆိုပါကိုက်ညီ အမ်စတာဒမ်အတွက်လုပ်ဖို့အများဆုံးထူးခြားသောအမှုအရာ ဥပဒေကြမ်း! အမ်စတာဒမ်အသက်အကြီးဆုံးရပ်ကွက်တွေထဲက၌ဤအနည်းငယ်သာအိမ်သူအိမ်သားသာဖြစ်ပါသည်2မီတာကျယ်ပြန့်. ပိုင်ရှင်ကယ့်ကိုအဟောင်းပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုသို့အသစ်သောအသက်တာ၌မှုတ်: အိမ်သူအိမ်သားတစ်ချိန်ကငါးတစ်မိသားစုနေရာချပေး! ကြောင်းဖြစ်သကဲ့သို့မယုံနိုင်စရာ, ကြောင်းတစ်ဦးတည်းသာဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့ tearoom ၌သင်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်းသောပုံပြင်များသည်.
ပထမဦးဆုံးအထပ်တစ်ပျူငှါနွေးထွေးသောနည်းနည်းလက်ဖက်ရည်စတိုးဆိုင်ဖြစ်ပါသည်, ဒုတိယနှင့်တတိယထပ်တစ်လက်ဖက်ရည်ထုံမွှန်းရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ရန်သင့်အားကြိုဆိုပါတယ်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်စဉ်. ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ဘို့များစွာသောရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်, မနက်လည်စာ, မြင့်မားတဲ့လက်ဖက်ခြောက်, ပင်နေ့လည်စာ. ငါနှစ်ကြိမ်အငယျဆုံးအိမ်များတွင်ပါပြီ: တစ်ချိန်ကငါနှောင်းပိုင်းတွင်တစ်နာရီခဲ့ဖို့ကြည်နူးဖွယ်နံနက်စာများအတွက် (ငါ့အကောင်းဆုံးသောနေ့ကမဟုတ်ခဲ့), နှင့်အခြားအလွန်မကြာသေးမီကလက်ချောင်းအသားညှပ်ပေါင်နဲ့နေ့လည်လက်ဖက်ရည်များအတွက်, သုံးကွဲပြားခြားနားသော pies, ကျွန်တော်တို့ရဲ့သနားတျောမူအိမ်ရှင်ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူတစ်စုံတစ်ခုကိုပယ်ရှားဖို့ကိုပူဇော်သောအခါနှင့် scones ဒါအရသာ, ကျွန်တော်ချီတုံချတုံမပြုခဲ့. ကျနော်တို့ကို ရွေးချယ်. ယခုနေ့လည်တွင်လက်ဖက်ရည်မှာစျေးနှုန်းခဲ့သည် 25 လူတစ်ဦးနှုန်း EUR, အဆိုပါအဆင့်မြင့်လက်ဖက်နေစဉ် 35 အီးယူအာရ်.
အမ်စတာဒမ်ခုနှစ်တွင်လုပ်ဖို့အများစုမှာထူးခြားသောအမှုအရာ: မျက်စိ Filmmuseum Explore
အမ်စတာဒမ်အပေါငျးတို့သ slick ခေတ်မီအဆောက်အဦးများ၏, ကဖြစ်ပါတယ် EYE Filmmuseum ထွက်ရပ်. ယင်း၏ချောမွေ့ပြောင်လက်နှင့်အတူ, ဆန့်ကျင်ဘက်အဆိုပါမြစ် IJ တလျှောက်ဆန့်တောက်ပအဖြူလိုင်း ဘူတာရုံ. မျက်စိအမ်စတာဒမ်စာရင်းထဲတွင်လုပ်ဖို့အများဆုံးထူးခြားသောအမှုအရာ၏ထိပ်ပေါ်မှာဆက်ဆက်ဖြစ်ပါသည်. ၎င်း၏အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ် ရုပ်ရှင်ရုံ, အတော်ကြာဖန်သားပြင်အစွန်းရောက်များနှင့်ဂန္ရုပ်ရှင်၏ကျယ်ပြန့ရာပူဇော်သက္ကာကိုနှင့်အတူ. ရှိပါတယ်, သို့သော်, ထို့အပြင်ယာယီထူးခြားသော အနုပညာပြပွဲ နှင့် သားသမီးတို့အဘို့လှုပ်ရှားမှုများ, ပေါင်း အတော်လေးချောအမြင်များ ပြန်မြို့လယ်ဆီသို့ဦးတည်. ဒါ့အပြင်ကဒီမှာပုန်းကွယ်, နှင့်အမြဲတမ်းပြသ, ရုပ်ရှင်ရှားပါးဂျင်း Desmet ၏စပျစ်သီးကိုရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်, အဖြစ်ဝေးအဖြစ်ပြန်ချိန်းတွေ့ကြရာ 1907. ဤနေရာတွင်နေ့လယ်စာကိုယူ, လွန်း: အဆိုပါကဖေးဘား ပထမဦးဆုံးအမှုနှုန်းဖြစ်ပါသည်.
ရှေးဟောင်းနှင့်ခေတ်မီနှစ်ဦးစလုံးလက်ကိုင်အိတ်၏သုံးထပ်, ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်ပိုက်ဆံအိတ်အမ်စတာဒမ်အရှိဆုံးတဦးအဖြစ် Tassenmuseum Hendrikje အောင် ပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့်ဆွဲဆောင်ဆွဲဆောင်မှု. စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောဟောင်းနှင့်ချောမောအိမ်ကြီးအတွက်တင်ပြ, ဟိုက်လိုက်အနုပညာ Nouveau နှင့် Art Deco အပိုင်းပိုင်းပါဝင်သည်, ခက်ပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ရှားပါးခြင်းနှင့်အရောင်တောက်တောက် 1950 လက်ကိုင်အိတ် Perspex တစ်ဦးစရိုက်ပုံစံတစ်ခုလုံးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် (Ethics သံသယရှိ) တိရိစ္ဆာန်များကနေဖန်ဆင်းတော်စပျစ်သီးကိုလက်ကိုင်အိတ်. ခေတ်ပြိုင်အိတ်များနှင့်ပိုက်ဆံအိတ်၏ယာယီပြပွဲစုဆောင်းခြင်းထွက်ပတ်လည်၌.
အဆိုပါ Poezenboot (အဆိုပါကြောင်လှေ)
အမ်စတာဒမ်အတွက်လုပ်ဖို့အများဆုံးထူးခြားသောအမှုအရာများထဲမှတစ်ဦးကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောတိရိစ္ဆာန်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မှရတဲ့ငါ့ကိုပါဝင်သည်ဆိုပါက, ထို့နောက်ငါ၌ရေတွက်! ပေါ်သွားပြီးအလွန်လူကြိုက်များ catboat သွားရောက်ကြည့်ရှု! ဟုတ်တယ်, သင်ညာဘက်ကိုဖတ်ရှု! ကြောင်ပုံမှန်အားဖြင့်အားလုံးကုန်ကျစရိတ်မှာရေကိုရှောင်ရှားသော်လည်း, အဆိုပါ felines ဒါမှမဟုတ် Poezenboot, သူတို့ရဲ့ရေပေါ်သန့်ရှင်းရာဌာနအပေါ်အိမ်မှာဿုံပုံပေါ်. ဒါဟာတစ်တူးမြောင်းပေါ်မှာ floating တိရစ္ဆာန်သန့်ရှင်းရာဌာနဖြစ်ပါသည် အမ်စတာဒမ်. ဒါဟာအတွက် Henriette ဗန် Weelde နေဖြင့်စတင်ထူထောင်ခဲ့သည် 1966 သွေများအတွက်နေအိမ်အဖြစ်, နာသော, နှင့်စွန့်ပစ် felines, နှင့်ကတည်းကတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကမေတ္တာသို့လာခဲ့သည်.
အဆိုပါ houseboat အထိရှိကြတယ် 50 တခါမှာကြောင်, 14 အမြဲတမ်းနေထိုင်သူများဖြစ်ကြရာ၏. လူ့ဧည့်သည်အဖြစ်ကောင်းစွာသင်္ဘောပေါ်ကြိုဆိုကြသည်. အတော်များများကကလေးမွေးစားခြင်းအဘို့အကြောင်တစ်ကောင်ရွေးချယ်ဖို့လာ, but tourists are also welcome to drop in and scratchakitty behind the ears.
ဒါကြောင့်တစ်ဦးမေတ္တာဖြစ်သကဲ့သို့, ဧည့်သည်များအားဖြင့်ကျန်ရစ်အလှူငွေများမှကျေးဇူးတင်စကားဖော့လှေသန့်ရှင်းရာဌာနပဲကျန်ရှိနေ. ကြီးပြင်းငွေရှိသမျှတတ်နိုင်သမျှအများအပြားအမ်စတာဒမ်ကြောင်ကူညီပေးနေဆီသို့သွားသည်. အဆိုပါကြောင်လှေဖောင်ဒေးရှင်းမှအဘယ်သူ၏ပိုင်ရှင်တွေတိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးစောင့်ရှောက်မှုမတတ်နိုင်ကြောင်၏လိင်မပါသောအဘို့အချေ, အဖြစ်သိုး. စေတနာ့ဝန်ထမ်းကြောင်ဂရုစိုက်, အဘယ်သူကိုအချို့ဧည့်သည်များအားဖြင့်မွေးစားနေကြ. အဆိုပါကြောင်သူတို့ရဲ့အသစ်ကအိမ်တွေမှာဿုံကောင်းစွာမြေပေါ်တွင်ဘဝမှပွုပွငျပွောငျးလဲယုံကြည်ကြသည်.
Going အဆိုပါအမ်စတာဒမ်တူးမြောင်းပေါ်မှာပလပ်စတစ်ငါးဖမ်း သေချာဘို့အမ်စတာဒမ်အတွက်လုပ်ဖို့အများဆုံးထူးခြားသောအမှုအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်! ငါ့ကိုသငျသညျပြောပြပါရစေ, ဒါကြောင့်အသံအတိအကျတူသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်. ပလတ်စတစ် Whale ကခရီးသွားဧည့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူတွဲတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတပဏာမခြေလှမ်း, အဆိုပါ2နာရီ လှေခရီးစဉ် တကယ်ပျော်စရာများနှင့်ပါနေရာများတွင်နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်ကယ်တင်တတ်၏. သငျသညျလှေထဲသို့ခြေလှမ်းပြီးတာနဲ့, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငါးဖမ်းပိုက်ကွန်ကို get, သငျတို့သပယ်သွားပါ!
အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကအခြားလှေခရီးစဉ်ကကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောလမ်းကြောင်းအရသိရသည်အတိတ်ရွက်လွှင့်နေစဉ်အတွင်းကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါသည်, သငျသညျဘယ်နေရာမှာမဆိုသှားဖို့ရငျသညျပလပ်စတစ်တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ. It turns intoacompetitive I Spy game where everyone is super invested in finding even the smallest bits of plastic bags. တစ်စုံတစ်ဦးကတူးမြောင်း၏ဘေးထွက်အနီးရှိပုလင်း spots သည့်အခါတစ်ဦးကိုမှန်ကန်အခမ်းအနားဖြစ်ပေါ်. ကပ္ပတိန်ကတော့ moored စက်လှေများအကြားမှာရှိတဲ့ fit မှသင်္ဘောကိုစီစဉျဆောငျရှကျအဖြစ်, သငျသညျထောင့်သင့်ရဲ့လက်မောင်းနှင့်ငျ့ကွှားဒုက္ခအထဲကငါးမျှား! အခြားခရီးသည်နှင့်အတူ weirdest ထိုနေ့၏ဖမ်းအဖြစ်ရယ်များနှင့်နှောင်ကြိုးဆွေးနွေးရန်ပြင်ဆင်ထား Be.
ငါသည်ဤအတွေ့အကြုံကိုကျိန်းသေသည်သင်၏အနေဖြင့်ထိုက်တန်သည်ဟုမထင်, နှင့်အမ်စတာဒမ်တူးမြောင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့ပုံမှန်မဟုတ်သောလမ်းကမ်းလှမ်း. သင်ပင်ပန်းလာပြီမပါဘဲပဒေသာရွှေ့မည်, နှင့်ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးတစ်ချိန်က, သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာအောင်မြင်မှုတစ်ခုအသိနှင့်အတူလှေထဲက step ပါလိမ့်မယ်. အားလုံးကြောင်းဖွင့်ဘို့ 25 အီးယူအာရ်.
သင်ကအမ်စတာဒမ် houseboats တဦးပေါ်အသက်ရှင်ဖို့နဲ့တူသောအရာကိုအစဉ်အဆက်သိချင်ကြလျှင်, ဒီအထဲကရှာတွေ့ဖို့သင့်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်. အမ်စတာဒမ်အတွက်လုပ်ဖို့အများဆုံးထူးခြားသောအမှုအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းကိုတွင်, သငျသညျ့လုပျနိုငျ! ပိုင်ရှင်တွေဖော်ရွေဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့၏ဂန္ houseboat ထဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါပြီ, အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည့် 1914 1960 ခုနှစ်တွင်ပြောင်းလဲမခံရမီသဲနှင့်ကျောက်စရစ်တစ်ကုန်တင်အဖြစ်. ဧည့်သည်များအတွက်ပျူငှါနွေးထွေးသောလူနေမှုဧရိယာကတဆင့်သူတို့ရဲ့လမ်းနေစဉ်နိုင်ပါတယ်, ရှင်းလင်း plaque လက်တဆုပ်စာကဆင်း houseboat ဘဝအပေါ်အနိမ့်ပေးရာအရပ်,. ပိုင်ရှင်တွေတစ်ဦးတည်းမဟုတ်; နီးပါး 3,000 စက်မဲ့ houseboats အမ်စတာဒမ်ဓာတ်ငွေ့နှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကွန်ရက်များသို့ပလပ်နေကြတယ်. သိချင်စိတ်ကျေနပ်မှု, you can stroll along the street to an excellent dining establishment, စားသောက်ဆိုင်ငှက်ကုလားအုတ်.
အမ်စတာဒမ်ခုနှစ်တွင်လုပ်ဖို့အများစုမှာထူးခြားသောအမှုအရာ: Tuschinski ပြဇာတ်ရုံမှတဆင့်တစ်ခုပေး Audio ခရီးစဉ်ကိုယူ
အဆိုပါရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Tuschinski ပြဇာတ်ရုံနောက်ကွယ်ကသမိုင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ. အခုတော့တစ်ဦး functioning ရုပ်ရှင်ရုံ, Reguliersbreestraat အပေါ်ပြဇာတ်ရုံလမ်းကြောင်းကိုအုပ်စုတစ်စု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. အဆိုပါထူးခြားသောမျက်နှာစာ Art Deco နဲ့အနုပညာ nouveau တစ်ဦးရောနှောဖြစ်ပါသည်. ဗိသုကာ Hijman လူး de Jong ကအားဖြင့် Tuschinskis ကော်မရှင်အပေါ် Created. အဆိုပါမျက်နှာစာဖြစ်သကဲ့သို့ဒါပေမယ့်အဖြစ်တော်တော်လေး, ရုပ်ရှင်ရုံအကြီးမားဆုံးခန်းမအမှန်တကယ်ပြဇာတ်ရုံနှင့်အနီရောင်ကတ္တီပါကုလားထိုင်အတွက်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကိုကြည့်အဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်ချစ်စရာကောင်းရာမရှိ.
အဆိုပါရုပ်ရှင်ရုံနေ့စဉ်ကမ်းလှမ်း အသံခရီးစဉ် ကြောင်းအကြားစတင်ရန် 09:30 နှင့် 11:30. အဆိုပါခရီးစဉ်အင်္ဂလိပ်နှင့်ဒတ်ခ်ျနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ရရှိနိုင်. ဒါဟာကြာရှည်ခံ 45 မိနစ်နှင့်ကုန်ကျစရိတ် 10 လက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ်ကော်ဖီခွက်ပါဝင်သော EUR. တစ် ဦး ကပဲ့ထိန်းခရီးစဉ်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည် ကနေစတင်ကြီးမားတဲ့အုပ်စုများ 15 လူထု. စာအုပ်, rondleidingen.tuschinski@pathe.nl အီးမေးလ်ပေးပို့.
သင်ပြဇာတ်ရုံ ambiance ခံစားရန်လိုပါလျှင်, သင်စီစဉ်ထားရုပ်ရှင်ပြကြည့်ယူနိုင်ပါသည်. အဲဒီမှာသင် PATH က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိအခြားဖျော်ဖြေပွဲတှေ့လိမျ့မညျ. ယင်းအတွက်ပြခံစားရန် လှပသောပြဇာတ်ရုံအာကာသ, မဟာခန်းမထဲမှာရုပ်ရှင်ရှာဖွေပါ. တခါတရံ, အဖြစ်ကောင်းစွာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖျော်ဖြေပွဲအဲဒီမှာနိုင်ပါတယ်.
အမ်စတာဒမ်အတွက်လုပ်ဖို့အများစုမှာထူးခြားသောအမှုအရာ: Rijksmuseum ခုနှစ်တွင်တစ်ခုက Escape ROOM တွင်စွန့်စားမှုတွင် Go
နွေရာသီမှာ ၏ 2018 Rijksmuseum ကန့်သတ်နွေရာသီအထူးဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ရာစတင်. ဒါဟာယခုတစ်မူထူးခြားသောဖြစ်ပါသည် ဂိမ်း exper Escapeကိုယ့်ence နှင့်အမ်စတာဒမ်အတွက်လုပ်ဖို့အများဆုံးထူးခြားသောအမှုအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းကိုပေါ်နှင့်အမ်စတာဒမ်အကျော်ကြားဆုံးပြတိုက်အတွက်ရာအရပ်ကိုကြာ. သို့သျောလညျး, ကနဦးရဲ့အောင်မြင်မှုအပြီးပုံ, အဆိုပါရှာပုံတော်နေဖို့ကဒီမှာ. အတွေ့အကြုံတစ်ခုရက်ရက်ရောရောကြာ 1.5 တကယ်နာရီနှင့်လေထုထဲသို့သင်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့. သင့်အနေဖြင့်အီတလီမျှောဆရာနှင့် alchemist Alessandro Cagliostro က 18 ရာစုစာအုပ်ကနေခိုးယူနေတဲ့ပုံသေနည်းပြန်လည်ထူထောင်နှင့်အတူတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်.
အမ်စတာဒမ်ကျော်ကြားအန်းဖရန့်အိမ်ကအမ်စတာဒမ်အတွက်လုပ်ဖို့အများဆုံးထူးခြားသောအမှုအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်အရာကြီးတစ်ခုအကြောင်းပြချက် ပို. စိတ်ကိစ္စရပ်များမှမြှုပ်နှံဒီသေးငယ်တဲ့ပြတိုက်ရန်အလွန်နီးကပ်!
မြင်း tailed အနုပညာရှင်နစ်ခ် Padalino ကပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့် operated. လျှပ်စစ် Ladyland အမ်စတာဒမ်စာရင်းထဲတွင်လုပ်ဖို့အများဆုံးထူးခြားသောအမှုအရာ၏ထိပ်ပေါ်မှာကျိန်းသေဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအလားတူအမည်ရှိလမ်းအဆင့်အထိအနုပညာပြခန်းအောက်မှာတွေ့နိုင်ပါသည်, လျှပ်စစ်သမ္မတကတော်. လျှပ်စစ် Ladyland ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ် (နှင့်ထင်ရသောသာ) museum focusing solely on the magic of fluorescent light.
ဒီထက်ခရီးထွက်မယ့်ခရီးစဉ်အပေါ်သွားကြဖို့အဆင်သင့်, ဒါပေမဲ့အိုးဤမျှလောက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့? အတူစီးကိုဖမ်း တစ်ဦးကရထား Save! အဘယ်သူမျှမဝှက်ထားသောအဖိုးအခ, ရုံလွယ်ကူခြင်း!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “အမ်စတာဒမ်အတွက်လုပ်ဖို့အများစုမှာထူးခြားသောအမှုအရာ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-unique-things-amsterdam%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#amsterdamtrip #UniqueAmsterdam travelamsterdam netရာဝတီ
ဥရောပမှာတော့အဆိုပါအများစုမှာ Instagrammable နေရာများဘာတွေလဲ
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ဥရောပခရီးသွား